I-China Economic ezine inqubo ye-R4 yokusika umshini wokusika izinkuni nabakhiqizi | JCUT
1. Umshini wokusika kanye wokuvula okuzenzakalelayo wezinhlelo ezine wenzelwe amakhasimende ukuthuthukisa ukusebenza kahle. Amakhanda amane alawulwa amasilinda futhi angashintshwa ngokunqunyelwe, angaqedela kalula izinhlelo ezinhlobonhlobo eziklanyelwe ikhasimende (ukucubungula izinto zokusebenza kudinga ushintsho lwamathuluzi ngaphakathi kwamathuluzi we-2-4), Okusindisa ushintsho lwommese oludidayo phakathi nendawo futhi ilungele imikhiqizo yezinqubo ezahlukahlukene ekwakhiweni kweminyango yokhuni, ifenisha kanye nezinsimbi zomculo. Le mishini inezinhlaka ezintathu, ezingathola ukusebenza kahle kwemishini yokuqopha izinhloko ezintathu zekhanda, umshini wokuqopha izinhloko obuye ube nezinhloko zombili ezinamakhanda, nomshini wokuqopha izinkuni ohlukahlukene.
2. Ukulawulwa kobuhlakani: uhlelo oluhlangene lokulawula umshini oluhlangene (hhayi ibhodi elilula + lekhompyutha), olunepulani, amandla acishiwe kanye nemisebenzi eqhubekayo yokuqopha, nomsebenzi wokulungisa iphutha okuzenzakalelayo ukubuyela ephuzwini lakuqala, kuqinisekisa ngokunemba kokusebenza lapho ukusebenza ubusuku nemini; Ukusekelwa kokusebenza kwe-U disk, mahhala kusuka ekuphazanyisweni kwegciwane lekhompyutha, ngokuthembela okuphezulu kanye nokusebenza kahle okuphezulu, ngasikhathi sinye okulula futhi okulula ukufundwa, amakhasimende angakwazi ukushesha nokusebenzisa amakhono imishini.
3. Idizayini enomuntu: Umsebenzi wokuvikela owenzelwe umngcele wokuvikela ukuvikela ukushayisana kwemishini okubangelwa ukwakheka kwendlula ukwedlula uhla lokucubungula; ukuhlakanipha kokulawula ijubane lokulawula: kungalawula ijubane lokucubungula, kuthuthukise ukusebenza kahle kokusebenza, kwandise impilo yethuluzi futhi kuthuthukise isivuno. Umshini wokufaka izikhala onemqubo emine, izinzuzo ezine zemishini yokufaka izinyathelo ezine, umshini we-CNC wokufaka
4. Umklamo oyingqayizivele womshini: noma yisiphi isiphongo singalungiswa ngepompo yomoya noma isikulufu ukucubungula izinto zokwakha okusetshenziselwa umsebenzi ngaphandle kokuzimisela. Ukuhlelwa kwethuluzi kunembile, isivinini esikhulu, futhi ukusebenza kahle kokucubungula kuphezulu.
5. Umsebenzi wokuxhaswa kwesoftware: i-algorithm yokubikezela esezingeni eliphakeme enamadijithi amathathu, i-polyline ezinzile, ingaqinisekisa ijubane nokunemba kokusebenza kwejika; umsebenzi wefayili wokuqhubekisa phambili wefayela, ungasiza abasebenzisi ukulungisa amaphutha ekusebenzeni kwamafayili ngesikhathi, futhi uhambisane kahle namakhodi wokucwaninga wasekhaya nowangaphandle akhiqizwe isoftware ehlukahlukene (njenge-MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, Jingdiao , njll.).
Umnyango wokuhlobisa ifenisha okhuni nokhuni: umnyango oqinile wamapulangwe, umnyango wekhabethe, indawo enkulu yokubopha amapulangwe, ukubaza okuqinile kwezinkuni nokugaya, ukufulela ifenisha yasendlini, ukubaza ifenisha yasendulo, ukubaza ifenisha yobuciko obuqinile neminye imboni.
Umshini Wokwenza Kwezomnotho R4 Izinkuni Zokusika Izinkuni
Indawo yokusebenza （S * Y * Z） 1300 * 2500 * 200mm
I-Spindle ekhethekile yokusika izinkuni nokuqopha IGDZ Air Cooling Spindle 6KW * 1 + 3.5KW * 3
Imoto I-leadlight 758s servo motor
Isistimu Yokulawula ShanLong L1000 Isistimu Yokulawula
Umqokeleli Wothuli I-5.5KW / 380V I-Colustor ephezulu yamandla aphezulu
I-Vaccum Pump Iphampu ye-adsorption ye-7.5KW / 380V
Ukudluliswa X, Y ukungenisa i-25 rack drive; Z Ngenisa iTaiwan Screw Drive Screw Dray Taiwan
Inverter IHpmont 7.5kw
Umkhawulo Umkhawulo ozinikele we-router yokusika izinkuni
I-Rack 1.5M irowu
Isikali sebhola I-TBI yasekuqaleni yokungenisa i-Ball screw
isilinda Ngenisa isilinda (ikhwalithi enhle nokuqina okuqinile)
Ijubane le-Spindle 0-24000 / MIN
Ikhabethe lokulawulwa kukagesi kuvinjelwe ngokuphelele i-intelligence yokusebenza kwekhabethe
Indlela yokumisa amathuluzi Ukulungiselelwa kwethuluzi okuzenzakalelayo
Ukulayisha okuzenzakalelayo Ukulayisha Ngokuzenzakalelayo, Cindezela ngokuzenzakalela umkhiqizo ophelile, ucindezele futhi ungeze umsebenzi wesibili wokususa uthuli
Ukwakhiwa Komshini Umbhede oshubile o-3.5 m obude obuqinile, ukugcwala kwensimbi
Voltage 380V 3 isigaba
Isisindo sengqikithi 2500kg
Isisindo esikhulu 2600kg
Ibhokisi Lokulawula Ibhokisi Elilawulayo Lezingqimba Ezimbili
Esedlule: Umklamo omusha we-spindle ATC yokhuni cnc router
Olandelayo: I-ATC izinkuni cnc 1325